AutoCAD သမားတွေ အတွက်ရော၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာများ၊ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူများ အတွက် နောက်ထပ် PDF နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Software တစ်ခုပါ။ Foxit PDF Editor လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Download ကို ဒီမှာလုပ်ပါ။ ပြီးရင် Install လုပ်ပါ။ Install လုပ်ပြီးတဲ့ ဖိုင်ကို ဖွင့်တဲ့ခါကျရင် Registry Key တောင်းပါလိမ့်မယ်။ Key မထည့်ဘဲနဲ့လည်း Evaluation နဲ့ကို တစ်နှစ်တိတိ Free ပေးသုံးပါတယ်။ အဲဒီ Free Version နဲ့ Register Version ရဲ့ ကွာဟချက်ကတော့ Save လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ Foxit က သူတို့ ကုမ္ပဏီကြော်ငြာလေးကို ထည့်ပေး တတ်တာပါပဲ။
အဲလိုမှ မဟုတ်ဘူး။ အပြည့်ပဲ သုံးချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့လည်း ဒီဖိုင်လေးကို Download လုပ်ပြီး နောက်တစ်ခေါက် Program Run တဲ့အချိန်၊ Key တောင်းတဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီဖိုင်ထဲ ပါသမျှ စာကို ကူးသာ ထည့်လိုက်ပေတော့။ အုံဖွ… အကုန်ရ ဆိုသလို…. ပလုံ ကနဲတောင် မမြည်ဘဲနဲ့ အလိုလျောက် ရေစစ္စကြီ ဗားရှင်းကြီး ဖြစ်သွားပါရောဗျာ… :)
Filed Under : Download, PDF, Software
Lacuna Coil said...
THANKS A LOT KO LU AYE:)
thanksalot TTO yay,
i m very glad as i can get free.
(we call TTO in our "PWINT" hostal)